CatchMark Timber Trust Inc (CTT) Q4 2019 ဝင်ငွေရရှိမှုမှတ်တမ်း The Motley Foole - တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး
CatchMark Timber Trust Inc (CTT) Q4 2019 ဝင်ငွေရရှိမှုမှတ်တမ်း အဆိုပါ Motley လူမိုက်
အရင်းအမြစ်ပုံရိပ် - The Motley Fool ။
CatchMark ကျွန်းသစ် Trust မှ Inc မှ (NYSE: CTT)
Q4 2019 ဝင်ငွေရရှိမှုခေါ်ဆိုမှု
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2020, 10: 00 နံနက် ET
ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ၊ CatchMark Timber Trust စတုတ္ထသုံးလပတ် 2019 ဝင်ငွေရရှိမှုခေါ်ဆိုမှုနှင့် webcasts မှကြိုဆိုပါသည်။ [အော်ပရေတာညွှန်ကြားချက်များ] ယခုကျွန်ုပ်သည်ဆွေးနွေးပွဲကိုဘဏ္Financialာရေးအရာရှိချုပ် Ursula Godoy သို့လွှဲပြောင်းပေးချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်သွားပါ။
Ursula Godoy-Arbelaez - အကြီးတန်းဒုဥက္ကPresident္ဌ, ဘဏ္Financialာရေးအရာရှိချုပ် & ဘဏ္asာရေးမှူး
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ စတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့် 2019 နှစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ CatchMark Timber Trust ၏ရလဒ်များနှင့် ၂၀၂၀ ကုမ္ပဏီ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် CatchMark ၏ဘဏ္Financialာရေးအရာရှိ Ursula Godoy ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဘရိုင်ယန်ဒေးဗစ်၊ အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာအရာရှိ Todd Reitz၊ Triple T Timberlands ဥက္ကPresident္ဌ John Rasor ။
ဤခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း CatchMark စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ရှေ့ရှုမျှော်မှန်းချက်များကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤရှေ့ရှုမျှော်မှန်းချက်များသည်စီမံခန့်ခွဲမှု၏လက်ရှိယုံကြည်မှုများနှင့်လက်ရှိရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ CatchMark ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှန်တကယ်ရလဒ်များကိုမျှော်လင့်ချက်များနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားစေနိုင်သည့်အချို့သောအန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာမှုများကြောင့်ထိခိုက်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Form 2018-K နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 10 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ SEC သို့တင်သွင်းသောနောက်ဆက်တွဲအစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည်။ ဒီနေ့တင်ပြချက်တွင် GAAP မဟုတ်သောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအစီအမံအချို့ပါဝင်သည်။ ဤတိုင်းတာမှုများနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်ငွေဖြန့်ချိရေးတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ဆက်မှုအပြီးတွင်ဘရိုင်ယန်၊ Todd၊ ဂျွန်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အားရနှစ်သက်ပါမည်။
ဘရိုင်ယန်အမ် Davis က - သမ္မတ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်ဒါရိုက်တာ
Ursula ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆိုမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် CatchMark ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောစတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့် ၂၀၁၁၉ နှစ်ပြည့်ရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ လာမည့်နှစ်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏လမ်းညွှန်မှုကိုပေးခြင်းနှင့် CatchMark ၏ရည်မှန်းချက်များကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်လမ်းညွှန်အခြေခံမူများချမှတ်ခြင်းနှင့်ထိုရည်မှန်းချက်များသည်တိုးမြှင့်မှုအပေါ်အဓိကထားသည်။ တည်ငြိမ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောငွေသားစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးခိုင်မာသောယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြတ်အစွန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်အစုရှယ်ယာရှင်၏တန်ဖိုး။
ကျွန်ုပ်တို့မစတင်မီလွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်ကျော်ကနယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်စဉ်ကတည်းကအသင်းနှင့်အတူ CatchMark ကို ဦး ဆောင်နေသူ Jerry Barag ၏ထူးခြားသောပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုချင်ပါသည်။ ထိုအချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရည်မှန်းချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်နှင့်နည်းဗျူဟာကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့သည်။ ရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသစ်ထုတ်လုပ်မှုအစုစုသည်ယုံကြည်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းခဲ့သည်။ ဂျင်ရီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖန်တီးမှုနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်သွားရန်၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ရသောငွေစီးဆင်းမှုတိုးတက်စေရန်ပို့ဆောင်မည့်မဟာဗျူဟာမြောက်အချက်သုံးချက်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသော CatchMark သင်တန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထိုမဏ္threeိုင်သုံးရပ်သည်အဓိကကျွန်းသစ်များ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ မြင့်မားသော ၀ ယ်လိုအားကြိတ်ခွဲစက်များစျေးကွက်များအနီးတွင်အကြွေး ၀ င်ငွေရှိသည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လည်ပတ်ခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ရသော ၀ င်ငွေနှင့်ပမာဏကိုရေရှည်တည်တံ့စေရန်ပို့ဆောင်ထားသောသစ်သားအရောင်းမော်ဒယ်နှင့်ဖိုင်ဘာထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်အားထားမည်ဖြစ်သည်။ တသမတ်တည်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းငွေသားစီးဆင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုချဉ်းကပ်မှုတွင်အပြောင်းအလဲမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သောဖောက်သည်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိစျေးကွက်အတွင်းနှင့်အနီးဝန်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်းသစ်များအားကောင်းလာစေရန်နှင့်တိုးချဲ့ရန်အထူးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုကတိုင်းပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိတ်ခွဲစျေးကွက်အချို့အထူးသဖြင့်အမေရိကန်တောင်ပိုင်းသစ်ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာထူးကိုရယူထားတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုက်ရိုက်အခကြေးငွေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းမှုကို ဦး စား ပေး၍ အဓိကပစ္စည်းများကိုဒေါ်လာ ၅ သန်းမှ ၅၀ သန်းအတွင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်5ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Coastal ဂျော်ဂျီယာဝယ်ယူ။
ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြီးထွားရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ အရွယ်အစားနှင့်မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းမှုအရကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကခရီးစဉ်ကိုထိရောက်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည့် Dawsonville Bluffs ဖက်စပ်မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏အလုံးစုံသြဇာကိုလျှော့ချရန်ကိုလည်းအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ စုပေါင်း၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချခြင်းအားဖြင့်အရင်းအနှီးကိုပြန်လည်ပြန်လည်ချထားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်များနှင့်မကိုက်ညီတော့ဘဲငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်ကိုက်ညီသောအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်လိုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အစုစုဆောက်လုပ်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွေးမြီလျှော့ချခြင်းနှင့်ရှယ်ယာပြန်လည် ၀ ယ်ယူမှုများပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်ရရှိသောငွေများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တိုးတက်မှုသည်တိုက်ရိုက်အခကြေးငွေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားရောင်းဝယ်မှု၊ အပိုဆောင်းဖက်စပ်ပူးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်သြဇာနည်းမှုတို့အပေါ်အဓိကထားသည့်စည်းကမ်းရှိသောချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှယ်ယာရှင်များအားကြိုတင်ခန့်မှန်း။ တည်ငြိမ်သောငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗျူဟာကိုရိုးရှင်းစွာထားရန်ရည်ရွယ်သည်။
2019 ရလာဒ်မြားကိုပွနျ။ CatchMark အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏လမ်းညွှန်မှုကိုလိုက်နာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သာလွန်ကောင်းမွန်သောကျွန်းသစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ သစ်သားအရောင်းမော်ဒယ်များ၊ ဖိုင်ဘာထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်များနှင့်တိကျခိုင်မာသောစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်များမှအကျိုးအမြတ်ရရှိမည့်မျှော်မှန်းငွေသားတိုးတက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် CatchMark ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီသစ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာခြင်း၊ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းစျေးနှုန်းများတွင်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသတွင်သစ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏများပြားလာခြင်း၊ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းရှိစျေးနှုန်းများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်သစ်စက်သစ်များတိုးတက်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့သည်။ ရောမွှေပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် Bandon ဝယ်ယူမှုပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသတွင်ပေါင်းစည်းမှုကိုအပြီးသတ်ပြီး၊ sawtimber ရောနှောမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်များအားလုံးကိုပြည့်မီစေသည့် Triple T ဖက်စပ်တစ်နှစ်ပြည့်မှပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
အတူတူယူ, ဤအစပျိုးအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်လည်ပတ်ငွေသားလည်ပတ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်တိုးတက်မှုအတွက် CatchMark အနေအထားကနေတသမတ်တည်းမြတ်များကိုထောကျပံ့ဆက်လက်။ Ursula သည်ယခုအခါဘဏ္resultsာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် Todd သည်စစ်ဆင်ရေး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ Ursula၊ မင်းကိုဘဏ္Financialာရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ်ကြိုဆိုဖို့ဒီအခွင့်အရေးကိုငါလိုချင်တယ်။ သင်ဟာ CatchMark စတင်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့အသင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့အားလုံးသည်သင်၏အခန်းကဏ္ new သစ်တွင်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။
ဘရိုင်ယန်၊ ဒီနေ့ခေါ်ဆိုမှုတွင်သင်တို့အားလုံးနှင့်အတူရှိနေရန်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘရိုင်ယန်မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း CatchMark သည်သစ်လုပ်ငန်း ၀ င်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေများကြောင့်စတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်နှစ်တစ်နှစ်လုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ ရလဒ်သည် ဦး ဆောင်သောကြိတ်ခွဲစျေးကွက်များအနီးတွင်အဓိကသစ်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ဆောင်ထားသောသစ်သားအရောင်းမော်ဒယ်နှင့်ဖိုင်ဘာထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းဗျူဟာ၏ထိရောက်မှုကိုအားဖြည့်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင် CatchMark သည်ဝင်ငွေ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၉.၁ သန်းတိုးလာခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် Triple T ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီမှရရှိသောဆုံးရှုံးမှုများလျော့နည်းခြင်း၊ EBITDA ကို ၆၁% တိုးမြှင့်ခြင်းမှ ၁၅.၁ ဒေါ်လာသို့တိုးမြှင့်ခြင်း၊ စုစုပေါင်းရိတ်သိမ်းပမာဏကို ၂၃% တိုးတက်ခဲ့ပြီးတန်ချိန် ၆၂၈၀၀၀ အထိတိုးလာခြင်း၊ စုစုပေါင်းသစ်ရောင်းအား ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်တက်လာခြင်းမှသန်း ၂၀ အထိတိုးလာသည်။ အသားတင်သစ်အမြတ်ငွေ ၃၀% တိုးလာခြင်းမှကန်ဒေါ်လာ ၁၁.၇ သန်းတိုးမြှင့်ပြီး Harvest EBITDA ကို ၄၂ ရာနှုန်းမှဒေါ်လာ ၉.၇ သန်းတိုးလာခဲ့သည်။ ရိတ်သိမ်းမှုပမာဏများပြားလာခြင်းနှင့်သစ်မာများတိုးပွားလာခြင်းတို့ကြောင့်အသားတင်သစ်များမှ ၀ င်ငွေတိုးလာသည်။ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းတွင် ၇% တိုးတက်မှုနှင့်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်စစ်ဆင်ရေးများမှရရှိသောသစ်မာပေါင်းစပ်မှုသည်တိုးလာသည်။
စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်းတွင် CatchMark သည်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားရှိလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများအနီးတွင်ရှိသောprimeက ၉၀၀ ​​ကိုအရင်းအနှီးပြန်လည်အသုံးချခြင်းမှရရှိသောငွေများဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၁-၂၀၁၈ ခုနှစ်အလားတူကာလများအတွင်းအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ EBITDA ကိုဒေါ်လာ ၂.၃ သန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၅ သန်းဖြင့်ကျွန်းသစ်acက ၃၂၀၀ ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ ဂျော်ဂျီယာသစ်တော900က ၁၄,၄၀၀ disposက၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအတွက်ဒေါ်လာ ၂၁.၃ သန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏အရင်းအနှီးပြန်သုံးရေးမဟာဗျူဟာ။ ငါတို့သည်ဒီဇင်ဘာလ 1.9, 3,200 ရက်နေ့တွင်စံချိန်၏ရှယ်ယာရှင်များမှရှယ်ယာနှုန်း $5တစ်မြတ်များပေးဆောင်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်အပြည့်အဝအတွက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အောက်ပါနှစ်တစ်နှစ်ရလဒ်များကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းဝင်ငွေသည် ၂၀၁၈ ပြည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁၀၆.၇ သန်း၊ အသားတင်အရှုံးကို ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ Triple T မှရရှိသောပိုမိုမြင့်မားသောရရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခွန်အခများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်အိမ်ခြံမြေ၏ပေါင်းစည်းမှုကြောင့်မောင်းနှင်နိုင်သည့်စုစုပေါင်းရိတ်သိမ်းပမာဏကို ၃% တိုးတက်ခဲ့ပြီးတန်ချိန် ၂ ဒသမ ၂၄ သန်းအထိတိုးမြှင့်ရရှိခြင်းကြောင့်၊ EBITDA ၏ညှိနှိုင်းမှုအား ၁၄% တိုးမြှင့်ပြီး ၅၆.၉ သန်းမှ ၅၆.၉ သန်းအထိတိုးမြှင့်ရရှိခဲ့သည်။ သစ်ရောင်းအားသည် ၄% တိုးတက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၇၂.၆ သန်း၊ အသားတင်သစ်မှအမြတ်ငွေ ၉% မှကန်ဒေါ်လာ ၄၁.၄ သန်းတိုးတက်ကာရိတ်သိမ်းမှု EBITDA ကို ၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၃၃.၇ သန်းအထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုအကျိုးအမြတ်များကိုသစ်ထုတ်လုပ်ရေးပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းရှိစျေးနှုန်းများမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်စစ်ဆင်ရေးများပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရရှိခဲ့သည်။
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသတွင်ဒေါ်လာ ၅.၂ သန်းတိုး။ တိုးလာခြင်းကြောင့်စုစုပေါင်းသစ်ရောင်းအားမှတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒေါ်လာ ၃.၁ သန်းတိုးလာခဲ့သည်။ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းဒေသတွင်ဒေါ်လာ ၂ သန်းကျဆင်းမှုကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ရောင်းအား ၉ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ စုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်၏။ US တောင်ပိုင်းရှိစုစုပေါင်းရိတ်သိမ်းမှုပမာဏမှာတစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျန်ရှိနေသည့်သစ်သားများစျေးနှုန်းသည် ၂% နှင့်သစ်စက်စျေးနှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ရိတ်သိမ်းမှုပမာဏများပြားလာခြင်းနှင့်သစ်မာရောနှောခြင်းနှင့်အမေရိကန်တောင်ပိုင်းစျေးနှုန်းများမြင့်တက်ခြင်းတို့ကြောင့်အသားတင်သစ်မှရငွေသည် ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ပြည့်နှစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Triple T လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပြည့်ရှိသောနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေမှ ၁၁၃% အထိဒေါ်လာ ၁၁.၉ သန်းအထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၀ င်ငွေဒေါ်လာတစ်သန်း၊ ညှိနှိုင်းထားသော EBITDA ၏ဒေါ်လာ ၄.၈ သန်းနှင့်အောင်မြင်သော Dawsonville Bluffs ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ဖြူးမှုအတွက်ဒေါ်လာ ၄.၈ သန်းရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Triple T အခကြေးငွေနှင့် Dawsonville Bluffs တို့၏ရလဒ်များကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှု EBITDA ကို ၃၅% တိုးကာဒေါ်လာ ၁၆.၇ သန်းသို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်းသစ်တောရောင်းအားသည်,က ၉,၂၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၇.၆ သန်းရောင်းချမှုကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ရရှိသောအကျိုးအမြတ်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရလဒ်များကိုကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ညီသည်။ ကျနော်တို့ $ 2019 သန်းအမြတ်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထူးချွန်ကြွေးမြီပေးဆောင် $ 113 သန်းများအတွက် 11.9 resက၏ကြီးမားသောပြဌာန်းချက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆.၃ သန်း (သို့မဟုတ်) ၀.၅၄ ဒေါ်လာအပြည့်အ ၀ ခံစားခဲ့ရသည်။ 600,000 ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ကိုလည်းပြုပြင် EBITDA နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ကြွေးမြီဆွေမျိုးလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်အပေါ်သိသိသာသာတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်နှစ်ကုန် 1 မှာ 4.8 ကြိမ်ကနေနိမ့်ကျရှစ်ကြိမ်အသားတင်ကြွေးမြီ -to- ညှိ EBITDA အချိုး၏ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ကုန်ပစ်မှတ်တွေ့ဆုံခဲ့သည် ဤအောင်မြင်မှုသည် Triple T မှရရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခွန်ဘဏ္revenuesာငွေ၏တစ်နှစ်ပြည့်သက်ရောက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကျွန်းသစ်များ၏ကြီးမားသောပြဌာန်းချက်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်လည်ပတ်နေသည့်အရင်းအနှီးပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအစီအစဉ်၏သက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်ဒေါ်လာ ၁၇၀.၆ သန်းမှဒေါ်လာ ၁၉၆.၆ သန်းအထိတိုးပွားလာသည်။ ၎င်းတွင်အကြွေးပမာဏဒေါ်လာ ၁၈၅.၁ သန်းနှင့်လက်ငင်းဒေါ်လာ ၁၁.၅ သန်းတို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိုးနှုန်းလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုရောနှောခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းအတွက်အခွင့်သာသောအတိုးနှုန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးချခဲ့သည်။ ကြွေးမြီဒေါ်လာ ၂၇၅ သန်းအပေါ်အတိုးနှုန်းသတ်မှတ်ရန်စတုတ္ထသုံးလပတ်အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ထားသည့်ကြွေးမြီများ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာသက်တမ်းပြန့်ပွားမှုနှင့်မျှော်မှန်းထားသောအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းမတိုင်မီပျမ်းမျှအားဖြင့်အတိုးနှုန်း ၂.၁၇% ဖြင့် ၉ နှစ်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်တတိယသုံးလပတ်အဆုံးတွင်ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၄ နှစ် ၂.၄၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
၂၀၁၁ ခုနှစ်ရလဒ်များအရဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်တို့ကိုပိတ်ခဲ့သောဂျော်ဂျီယာကျွန်းသစ်များ၌မကြာသေးမီကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းတန်သစ်များအကျုံး ၀ င်မှုမပါ ၀ င်ပါ။ ဤငွေပေးငွေယူမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များကိုဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင်ခန့်မှန်းခြေကန်ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းခန့်ပြန်ဆပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ floating rate ကြွေးမြီသည်ယခုအခါ ၆၃% ရှိပြီးငွေဖြစ်လွယ်မှုသည်ဒေါ်လာ ၂၀၆ သန်းအထိတိုးလာသည်။ ဤရလဒ်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကိုအလေးအနက်ထားကာကျွန်ုပ်တို့၏ဟန်ချက်ညီချက်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအားဖြည့်မှုကိုအာရုံစိုက်သည်။ 2019 စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်း၊ CatchMark သည်ကုမ္ပဏီ၏ဒေါ်လာ ၃၀ မီလီယံရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်အရမည်သည့်ရှယ်ယာများကိုပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်းမရှိပါ။ ၂၀၁၁ ပြည့်နှစ်ပြည့်နှစ်အတွက်ကုမ္ပဏီသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှယ်ယာ ၃၂၉,၀၀၀ ကိုဒေါ်လာ ၃ သန်းဖြင့်ပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁၅ ဒသမ ၇ သန်းကျန်ရှိတော့သည်။
ယခုငါစစ်ဆင်ရေးပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ Todd လွှဲပြောင်းပါလိမ့်မယ်။
Todd P. Reitz - အရင်းအမြစ်အရာရှိချုပ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ursula အစပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုကျေပွန်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်အတူတကွဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွင်းဆင်းမန်နေဂျာကိုအသိအမှတ်ပြုချင်ပါသည်။ ၄ င်းတို့၏အားထုတ်မှုသည်အလွန်ခိုင်မာသောစတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်းထပ်မံအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောသစ်မာရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာသောကြိတ်ခွဲစျေးကွက်များ၊ ဖိုင်ဘာထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်မိတ်ဖက်များ၊ သစ်သားမော်ဒယ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းကောင်းသည့်သစ်သီးများရောင်းအားကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်မောင်းနှင်သူများအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိပြီး TimberMart-South Southwide ပျမ်းမျှထက်သိသိသာသာမြင့်မားသောထင်းရှူးထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်စျေးနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။
အထူးသဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၌ CatchMark သည် TimberMart-South ပျမ်းမျှပျမ်းမျှထက် pulpwood အတွက် ၄၇% ပိုမိုမြင့်မားပြီး sawtimber အတွက် ၃၁% ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကိုရရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်အိမ်ရာ၏အရှိန်အဟုန်မြှင့်သောအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခွင့်ပြုချက်များတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အိမ်ဆောက်သူများအမှာစာဖိုင်များသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက်ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်းစတင်ရန်စီမံကိန်းကိုညွှန်ပြနေခြင်းကြောင့်အားတက်မိသည်။ ၎င်းသည်သစ်ဝယ်လိုအားကိုပိုမိုအားကောင်းစေပြီးထုတ်ကုန်များအတွက်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သစ်စျေးကွက်တွင်ရောင်းလိုအားတိုးတက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသင့်သည်။ လက်ရှိအိမ်ရာသိုလှောင်မှုနိမ့်ကျခြင်း၊ အပေါင်ထားနိုင်သောနှုန်းထားများနှင့်ခိုင်မာသောလုပ်ခများအပါအ ၀ င်ခိုင်မာသောအလုပ်အကိုင်စျေးကွက်အားလုံးသည်ဤကောင်းမွန်သောအလားအလာကိုထောက်ခံသည်။
ထို့အပြင်အမေရိကန်တောင်ပိုင်းရှိ CatchMark တွင် sawmill capital တိုးတက်မှုနှင့် greenfield စီမံကိန်းများကိုအထူးသဖြင့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လာမည့်နှစ်များအထိကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များတွင်ပြည့်ပြည့် ၀၀ ပြည့်ပြည့် ၀၀ ၀ င်ရောက်လာနိုင်သည့် ၀ ယ်လိုအားကိုမျှော်လင့်မထားသော်လည်းဒေသတွင်းနှင့်ဒေသတွင်းမိုက်ခရိုစျေးကွက်များ၌အစောပိုင်းဝယ်လိုအားတက်လာခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ ရာသီအလိုက်စီးဆင်းမှုနှင့်စီးဆင်းမှုများနှင့်အတူယခုနှစ်အတွင်းစျေးနှုန်းအနည်းငယ်တက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ယခုနှစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိတ်သိမ်းပမာဏသည်တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၃ သန်းမှ ၂ ဒသမ ၅ သန်းအထိတိုးမြှင့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှု၏ ၉၅% မှာ US တောင်ပိုင်းလုပ်ငန်းများမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ sawtimber ရောစပ်မှုသည်အမေရိကန်တောင်ပိုင်းမှ ၄၀% နှင့်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်မှ ၈၀% ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ပထမသုံးလပတ်ရိတ်သိမ်းမှုပမာဏသည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ပိုမိုမြင့်မားမည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီးပထမသုံးလပတ်စျေးနှုန်းသည်သုံးလပတ်လေးပုံတစ်ပုံထက်များနိုင်သည်။
နောက်ထပ် ၂၀၂၀ လမ်းညွှန်မှုအတွက်ငါအဲဒါကိုဘရိုင်ယန်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်ကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်အညီ၊ လမ်းညွှန်မှုတွင်ဝယ်ယူမှုများ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များသို့မဟုတ်အရင်းအနှီးထပ်မံစွန့်ပစ်ခြင်းများမှဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပံ့ပိုးမှုများမပါ ၀ င်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော Dawsonville Bluffs မှထည့်ဝင်သည့်လျော့နည်းသည့်တုန့်ပြန်မှုများကိုထင်ဟပ်စေရန်ညှိနှိုင်းထားသော EBITDA ကိုဒေါ်လာ ၄၈ သန်းမှ ၅၆ သန်းကြားခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းမှ ၁၅ သန်းအကြားရှိ GAAP အသားတင်ဆုံးရှုံးမှုသည် Triple T. မှရရှိသောဆုံးရှုံးမှုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းကိုထင်ဟပ်သည်။ Todd မှတ်ချက်ပြုထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရိတ်သိမ်းပမာဏတန်ချိန် ၂.၃ သန်းမှ ၂.၅ သန်းအကြားမျှော်လင့်ရသည်။ အဓိကအားဖြင့် Triple T. Higher မှရိတ်သိမ်းမှုပမာဏနှင့်စျေးနှုန်းများပုံမှန်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Triple T. Higher မှမျှော်လင့်ထားသည့် Triple T. Higher မှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအခွန်မှဒေါ်လာ ၁၁ သန်းမှ ၁၂ သန်းအထိရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Dawsonville Bluffs မှသိသာသောပံ့ပိုးမှုများမရှိခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှု EBITDA ကျဆင်းလိမ့်မည်။
Timberland ၏ရောင်းအားသည်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းမှ ၁၇ သန်းအထိရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်စဉ်ကြေးမှာ ၁% မှ ၂% အထိရှိသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကကျွန်းသစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်ဆက်လက်အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်လုံ့လဝီရိယရှိသောဝီရိယရှိခြင်းသည်ရေရှည်တည်တံ့သောအထွက်နှုန်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုင်ရာအရည်အသွေးများအပေါ် မူတည်၍ ရေရှည်တည်တံ့သောအထွက်နှုန်းနှင့်တာရှည်ခံငွေစီးဆင်းမှုကိုရရှိရန်နှင့်သာလွန်သောကြိတ်ခွဲဈေးကွက်တွင်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုတည်ရှိမှုကို သုံး၍ သင့်လျော်သောစျေးကွက်ပြင်ပစာချုပ်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိစက်ရုံစျေးကွက်အတွင်းနှင့်အနီးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အတွက်မြင့်မားသောစည်းကမ်းနှင့်သမ္မာသတိရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သစ်သားပုံစံကြားခံများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်တည်ရှိမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုဆက်လက်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် CatchMark သည် 2019 ၏ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်တိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်အနေအထားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။ EBITDA ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသိသိသာသာတိုးလာခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းပမာဏပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ သစ်ရောင်းအားတက်လာခြင်း၊ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းသစ်တောခြင်းတောင်းတွင်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်သစ်မာသစ်များရောနှောခြင်း၊ အသားတင်သစ်များဝင်ငွေတိုးပွားလာခြင်းနှင့် Harvest EBITDA၊ Pacific Northwest၊ Triple T မှရရှိသောသိသာထင်ရှားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေ၊ Dawsonville Bluffs ၏အောင်မြင်မှုနှင့်ကျွန်းသစ်ရောင်းအားရည်မှန်းချက်များပြည့်မီခြင်း။
ထို့အပြင်ပစ်မှတ်ထားကြီးမားသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသောအရင်းအနှီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနည်းဗျူဟာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း၊ သြဇာကိုလျှော့ချခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်ကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုဗျူဟာကိုဆက်လက်တိုးပွားစေမည့်အဓိကကျွန်းသစ်များတွင်အနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်ုပ်တို့မှာခိုင်မာတဲ့စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့အမှုဆောင်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများရှိနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အဓိကကျွန်းသစ်များနှင့်သာလွန်သောကြိတ်ခွဲစက်စျေးကွက်များအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ရိုးရှင်းပြီးသက်သေပြသည့်နည်းဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။
အတူတူအတူတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်အဖွဲ့ကကွပ်မျက်ခံရသောဤအစပျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်လည်ပတ်ငွေသားစီးဆင်းမှုကထောက်ခံတသမတ်တည်းခွဲဝေပေးဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကို enable ပါလိမ့်မယ်။ CatchMark ရှိကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရှေ့ဆက်သွားမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရေးအတွက်စည်းကမ်းရှိရှိ၊ ဆက်ကပ်အပ်နှံ။ ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Ursula, Todd, John နဲ့ငါမင်းတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းနှင့်အဖြေကိုစတင်ပါမည်။ [အော်ပရေတာညွှန်ကြားချက်များ] နှင့်ငါတို့၏ပထမဆုံးမေးခွန်းမှာရေမွန်ဂျိမ်းစ်နှင့်အတူ Collin Mings မှဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်ပါ
Collin mings - ရေမွန်ဂျိမ်းစ် & Associates မှ - လေ့လာဆန်းစစ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းသောနံနက်, ဘရိုင်ယန်နှင့်အဖွဲ့သည်။ လူတိုင်းကိုတဖန်ဂုဏ်ပြုလွှာ။
ဂရိတ်။ ကောင်းသောနံနက်, Collin ။
စတင်ဖို့၊ မင်းရဲ့နိဒါန်းမှာပါတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းအလဲကိုငါလိုက်ချင်ခဲ့တယ်။ Brian ။ ပထမ ဦး စွာအကူးအပြောင်း၏အချိန်အပေါ်သင်ဖြည့်စွက်အပိုဆောင်းအရောင်ရှိပါသလား ဘရိုင်ယန်၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားနဲ့သင်ဘုတ်အဖွဲ့ကကုမ္ပဏီဆီကိုသွားကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကသင်၏ပြင်ဆင်ထားသည့်မှတ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သကဲ့သို့ငါသိချင်ခဲ့သည်။ နိမ့်သောသြဇာသည်အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ သင်နှင့် Ursula တွင်တိကျသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုရှိသလား။
သေချာပါတယ်, Collin ။ ငါယူမယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်Aprilပြီလမှာသမ္မတအဖြစ်ကျွန်တော့်ကိုရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ပ်တို့တွင် ၀ န်ထမ်းကိုးယောက်ရှိသည့် IPO ရှိသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၂၅ ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ခုံတန်းလျားခွန်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထူးအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ယခုအခွင့်အလမ်းများကိုပြည်တွင်း၌ဖြည့်ဆည်းရန်ရှေ့သို့ကြီးစွာသောခြေလှမ်းလှမ်းနေသည့်လူအများ၏ဤလတ်တလောခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က Alston & Bird မှပြင်ပအထွေထွေအကြံပေးကိုယူဆောင်လာပြီးဖြစ်သည်။ Todd Reitz သည် Plyer Creek လမ်းဖြင့် Weyerhaeuser မှကျွန်ုပ်တို့ထံသို့လာသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာခုံတန်းရှည်ကြီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကာလ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့သို့တိုးတက်မှုအပေါ်အလွန်စိတ်သက်သာရာရစေသည်။
ယခုတွင်သင်၏နောက်ဆုံးမေးခွန်းသည်ချဉ်းကပ်မှုသို့ပြန်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည်အမှန်တကယ်တွင်ကျွန်းသစ်များနှင့်ဝယ်လိုအားမြင့်မားသောကြိတ်ခွဲစျေးကွက်များ၏စည်းကမ်းများကိုရယူခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ တည်ငြိမ်သောငွေစီးဆင်းမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးမြှင့်အဆိုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ဖတ်ပါ၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်ဘက်လိုက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားရှိသောကုမ္ပဏီအတွက်ပိုမိုနိမ့်သည့်သြဇာသက်ရောက်မှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံကို ဦး တည်သည်။ ၎င်းသည်ရည်မှန်းချက်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ရည်မှန်းချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိဘဏ္whatာရေးသဘောတူစာချုပ်များအတွင်းတွင်သာရှိခြင်းသို့မဟုတ်အနီးအနားတွင်မရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုတွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ရင့်ကျက်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ငွေအလုံအလောက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်၎င်းသည်သြဇာသက်ရောက်ရန်လမ်းညွှန်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဘက်လိုက်မှုပိုမိုဖြစ်လိမ့်မည်။
အိုကေ။ တရားမျှတပါတယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအကြောင်းအရာနှင့် ကပ်၍ သင်လုပ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများနှင့်လည်းထိတွေ့လိုသည်။ ဘရိုင်ယန်၊ မင်းကြည့်နေတုန်း၊ ဒါကရှုပ်ထွေးမှုနည်းတယ်၊ အနာဂတ်မှာရှုပ်ထွေးမှုနည်းသွားမယ်၊ မျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်၊ အသေးစားဖက်စပ်အခွင့်အလမ်းများကိုလုပ်လိုစိတ်ရှိနေတုန်းပဲ။ JV ၏ရှေ့မှောက်၌ပင်သိလိုသည်မှာ Dawsonville ၏လေကိုထပ်မံပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်သင်၏ရှေ့တွင်သင်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ရေတိုအခွင့်အလမ်းများရှိပါသလား။
yeah ။ ဒီတော့ဒါကအနာဂတ်မှာ JVs နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် Dawsonville Bluffs ကကြီးကျယ်တဲ့ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ကျနော့်အဖွင့်မှတ်ချက်တွေကအဲဒီစိတ်ခံစားချက်အချို့ကိုဖမ်းမိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Dawsonville ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအားဖြင့်ဤအောင်မြင်မှုအမျိုးအစားကိုဖက်စပ်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အပြုသဘောအမှားရှိသည်။ 2019 သည် Bandon နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် Triple T. ၏တစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်အလုပ်များသောနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် 2019 ၏စတုတ္ထသုံးလပတ်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အားထုတ်မှုများကိုပြန်လည်အားဖြည့်ခဲ့သည်။ အဖြစ်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူမှု။
အိုကေ။ ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်ကပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီသည်သစ်စျေးကွက်တွင်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပုံကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Triple T ဖက်စပ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက် GP နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိရန်အတွက်သင်သည်ဝင်ငွေရရှိမှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်မလိုတော့ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဟာက Triple T နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဆီသို့သင်၏နောက်ဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသတိပေးနိူင်သည်။ အထူးသဖြင့် CatchMark တွင်နှစ်နှစ်အတွင်းဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်တစ်ခုခုကိုခေါ်ရန်ပထမနှစ်နှစ်အတွင်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောင်းဖက်စပ်ဖွဲ့စည်း၏။
မှန်ကန်သော။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်ခေါ်ဆိုမှုများ၌သတိပြုမိခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အိမ်ခြံမြေကိုစတင်စီမံခန့်ခွဲကတည်းက GPs များနှင့်ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ John Rasor ၏လမ်းညွှန်မှုအရကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိသစ်သားထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်များအရရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီအောင်ပြုလုပ်သည်။ ။ GP နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆွေးနွေးမှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိမည့်အလားအလာရှိသောသဘောတူညီမှုပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အရောင်းအ ၀ ယ်ရှိ၊ ပြီးတော့မှတ်သားသင့်ပါတယ်၊ ကောလင်၊ သင်မှန်ပါတယ်၊ Collin၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ၀ င်ငွေခေါ်ယူမှုအကြောင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့က GP နဲ့သဘောတူညီချက်ရနိုင်ရင်၊ ကျွန်တော်တို့က GP နဲ့သဘောတူညီချက်မရနိုင်ရင်တော့ Triple T ဖက်စပ်လုပ်ငန်းကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်အခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေနဲ့ကိုက်ညီလိမ့်မယ်။ , ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ Triple T သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ဆဲ၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်အတွင်းအလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသည့်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီအောင်ကောင်းစွာစီမံပြီးအခြားဝင်ငွေရရှိမှုမှအကျိုးရယူ အခွင့်အလမ်းများ။
အိုကေ။ ဘရိုင်ယန်အဲဒီအရောင်ကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။ သုံးလပတ်အတွင်းဂီယာများကိုသာလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း၊ သင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါသလား၊ တစ်acကလျှင်ငွေပေးငွေယူစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်မတူညီသောအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏perကလျှင်သိသာထင်ရှားပါသည်။ နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်က Timberland ရောင်းဝယ်မှုအတွက်တစ်perကတစ်ပေါက်စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေအများကြီးရှိပေမယ့်သင်အဲဒီအရောင်တွေကိုအရောင်အနည်းငယ်ပေးနိုင်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီသဘောပေါက်နားလည်မှုကိုဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတာပဲ။
ဟေ့, Collin, ဒီ Todd ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လောင်းသည် အဲဒီမှာ - စတုတ္ထသုံးလပတ်မှာကျနော်တို့ $4သန်းသဘောတူညီချက်နှင့်အတူပိတ်ပစ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သစ်မာကျွန်းများရောင်းအားအမှန် ဖြစ်၍ ၎င်းမှာအသုံးပြုရလွယ်ကူသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းသောသစ်မာဖြစ်ခြင်းသည်စတော့ရှယ်ယာအဆင့်နှင့်ကုန်းမြင့်ရပ်တည်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စျေးနှုန်းများမရှိသောကြောင့်သင်အနည်းငယ်နိမ့်သောနှုန်းကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။
အိုကေ။ နောက်တစ်ခုကငါ့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ခုပါ။ တဖန် Todd သည်ကျွန်းသစ်တောစျေးကွက်များနှင့်အထူးသဖြင့်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသရှိသစ်လုံးများ၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့်သင်ကဲ့သို့ယောက်ျားများရှိသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသကဲ့သို့၎င်းကိုသင်အလေးအနက်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ရုံမျှမက၊ ပို့ကုန်စျေးကွက်၏ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသတွင်တင်းမာမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားဝင်ငွေရရှိမှုအချို့အရဥရောပ၏ဆယ်ယူသစ်သားအခြေအနေနှင့် coronavirus နှစ်မျိုးစလုံးမှဖန်တီးခဲ့သောမသေချာမရေရာမှုများသည်ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီဒေသမှာရိတ်သိမ်းမှုပမာဏတိုးများလာတာနဲ့အမျှပစိဖိတ်အနောက်မြောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့အတွေးတွေပဲ။
သေချာတာပေါ့။ ထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင်မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်၊ ငါတို့မှာကြီးမားတဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဘူး၊ ပို့ကုန်နယ်ပယ်တစ်ခုလုံးမှာကစားလို့မရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒါကတင်းမာမှုကိုဖြစ်စေတယ်၊ ​​နောက်ကျလာတာနဲ့အမျှငါတို့မှာစျေးနှုန်းမြှင့်တင်မှုတချို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။ ဒါကတကယ်ကနေပြီးဂျပန်ဈေးကွက်ထဲကို ၀ င်ရောက်လာတဲ့ကနေဒါသစ်လုံးစီးဆင်းမှုရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရတာနည်းနည်းလျော့သွားပြီ။ ဒါကြောင့်ငါတို့အချို့သောပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသတွင်ကောက်ကြောင်းမြင်ကြပြီ။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကမှစပြီးစျေးနှုန်းကျိုးနွံစွာတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ပို့မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရုံသာမကဘဲပြည်တွင်း၌ပင်စျေးကွက်တွင်တိုးတက်မှုအချို့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်မည်မျှကြာရှည်မည်ကိုမည်သူသိသည်။ တစ်လဖြစ်နိုင်ပြီးလေးပုံတစ်ပုံလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲလိုလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာဒေတာအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအခြေအနေတွေတိုးတက်လာနေတယ်။ ငါတို့ကြည့်ချင်တယ်
ဒါ့အပြင်တောင်ဘက်မှာလည်းဒီနေရာမှာထူးခြားမှုအနည်းငယ်တွေ့ရသည်။ သငျသညျအလားအလာလျှော့ချအကောက်ခွန်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအတိအကျမသိဘူး။ ငါတို့တစ်ခုခုတစ်ခုခုလာတော့မယ်ဆိုတာသိပေမယ့်တောင်ပိုင်းမှာမကြာသေးခင်ကစျေးကွက်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်အစောပိုင်းညွှန်ပြချက်ဖြစ်သော်လည်းလာမည့်အရာများဖြစ်သော်လည်းအခွန်နှုန်းထားများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းအထိရှေ့ဆက်သွားရမည့်ပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့အတိအကျမသိရသေးသော်လည်း၎င်းသည်အားတက်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ခဲ့ပါဘူး ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကြိုဆိုပါတယ်။ တနည်းကား, ပြန်ခြုံငုံစျေးကွက်အတွက်တင်းမာမှု။ Outlook သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းဖောက်သည်များအားလုံးနှင့်အတူအစီအစဉ်များ၏အလုံးစုံအစီအစဉ်တွင်အလွန်အပြုသဘောဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်၊ သင်စိုးရိမ်မှုအပေါ်တွင်လုံး ၀ မထိရောက်ပါ - သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဥရောပသစ်သစ်နှင့်ပတ်သက်သောပြissueနာသည်အချို့ကသူတို့၏နောက်ဆုံးအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းကြသည် တစ်နှစ်ကျနော်တို့ဆင်းသွားတွေ့မြင်နိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှလာမည့်အချိန်ကာလ၌ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ စိုးရိမ်စရာတစ်ခုလုံးဝမရှိပါ။
အိုကေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါကကျော်လှည့်ပါလိမ့်မယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Collin ။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ Citi မှ Anthony Pettinari မှဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်ပါ
Randy Toth - ရေမွန်ဂျိမ်း - လေ့လာဆန်းစစ်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ဒါက Randy Toth ဖြစ်ပြီး Anthony အတွက်ပါ။
ကောင်းသောနံနက် Randy ။
အလယ်အလတ်တွင် ၅% ကျော် [စစ်ဆေး။ မရသော] တက်လာသည်။ သင်ရုံတစ်နှစ် - တစ်နှစ်မျှော်လင့်ချက်များမောင်းနှင်ဘာအကြောင်းပြောနိုင်သလား?
yeah ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုစု၏အကျိုးအမြတ်များကိုအများဆုံးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအဓိကထားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအထိမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းအပြင်အခြားဝင်ငွေများရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတွင်ရိတ်သိမ်းမှုနောက်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ရိတ်သိမ်းခြင်းလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေး၏အောက်ဆုံးတွင်ရိတ်သိမ်းခြင်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်တွင်Southernကတစ်38က ၃၈ တန်မှ ၄၃ တန်အထိတိုးပွားလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တောင်ပိုင်းသိုလှောင်မှုကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သစ်တောနှင့်ဆက်စပ်သောတန်ဖိုးကိုအမြင့်ဆုံးကြည့်ရှုသောအခါကုန်ပစ္စည်းစာရင်းရှိသည်။ ဈေးသို့အပ်ခံရဖို့။ ထိုအခါငါကအရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားစဉ်းစားပါ။ Todd, ၂၀၂၀ အတွက်ရိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောရန်စိတ်ထဲမထားပါက။
ဘရိုင်ယန်။ ဒီတော့ ၂၀၂၀ ကိုကြည့်ရင်ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ကိုအပြည့်အ ၀ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်၊ ပြီးတော့တကယ်တောင်မှတောင်ပိုင်းကျွန်းသစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသာမန်သင်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် ၂၀၂၀ အတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်မယ့်။ ကျွန်ုပ်တို့အစီအစဉ်သည်သက်ဆိုင်ရာ ၇၅% အထိသာရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖိုင်ဘာထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီချက်ပါတနာများနှင့်ဆက်ကပ်ပြီးသော့ခတ်ထားသောတန်ချိန် ၀.၅ သန်းခန့်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်းအပြင်ဘက်အလားအလာရှိပါသည်။ Q2020 ထုတ်လုပ်မှုကို '၁၉၉ ထက်ကျော်လွန်ကြည့်ပါက' ၂၀ ၏ပထမသုံးလပတ်ကိုကြည့်လျှင် '2020 ၏ပထမသုံးလပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အဖွင့်မှတ်ချက်တွေအရကျွန်တော်တို့စျေးနှုန်းဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျိုးနွံစွာတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီတော့လေးပုံတစ်ပုံကျော်လောက်ကဒါတွေဟာအပြားပြားကြီးပြီးငါတို့ရှေ့ကိုတိုးတက်နေချိန်မှာကြီးထွားလာနိုင်တယ်။
ပထမသုံးလပတ်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြည့်ရှုသည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအနည်းငယ် ပို၍ တသမတ်တည်းစီးဆင်းမှုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ '19 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအဆောက်အအုံကိုမတွေ့ရပါ။ Q1 ကိုသင်စဉ်းစားသောအခါ Q4 သည်ထုတ်လုပ်မှုရက်များများပိုရသည့် Q2 နှင့် Q3 တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် QXNUMX သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောထုတ်လုပ်မှုရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။
အိုကေ။ ဒါကကူညီပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြီးတော့ဂျော်ဂျီယာမှာမကြာသေးခင်ကအခြေအနေကနေရရှိတဲ့ငွေတွေအပါအ ၀ င်၊ မင်းဟာရှစ်ခါလောက်သြဇာသက်ရောက်ပုံရတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အကုန်တွင်သင်ရောက်ရှိချင်သောပစ်မှတ်အကွာအဝေးရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟေ့ Randy ဒါဟာသိပ်ကိုဆင်တူပါတယ်။ ငါ Collin ပစ်မှတ်နှင့်ပတ်သက်။ အဖြစ်မေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တကယ်ပစ်မှတ်မရှိပါ။ ဒါဟာ ဦး တည်ချက်အများကြီးပိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ၈ ကြိမ်သြဇာရှိသည့်နေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်လိုက်မှုသည်ထိုသြဇာနံပါတ်ကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့မှာအမြတ်အစွန်းတွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမြင်သာမှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုကောင်းမွန်သည်။ ငါတို့မှာရေတိုရင့်ကျက်မှုမရှိဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ဘဏ္financialာရေးပcovenိညာဉ်အတွင်းမှာပဲ။ ဒါကြောင့်ပစ်မှတ်ရှိခြင်းရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်ပါ။ ဤအချိန်တွင်၎င်းသည် ဦး တည်ချက်တစ်ခုထက်ပိုသည်။
အိုကေ။ ဒါကကူညီပါတယ် ငါကကျော်လှည့်ပါလိမ့်မယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်မေးခွန်း Baird နှင့်အတူ Dave Rodgers မှလာလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်ပါ
David Rodgers - Robert W. Baird & Co - လေ့လာဆန်းစစ်သူ
yeah ။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ငါခန့်မှန်းငါအစုစုကိုအကြောင်းပြောချင်တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့သင် IPO ကတည်းကသင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်မှစ၍ ကြိတ်ခွဲစျေးကွက်များပြောင်းလဲလာသည်။ ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွင်းသင်ပိုမိုကြီးမားသောရောင်းအားအနည်းငယ်ကိုသင်ယခုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အစုစုပမာဏမည်မျှရှိသည်၊ သင်အစုလိုက် ၀ ယ်လိုသောအရည်အသွေးမြင့်စက်ရုံများတွင်ယနေ့မည်သည့်အစုစုမည်မျှရှိနေသည်၊ သင်အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မည့်အရာကိုသင်မည်ကဲ့သို့စဉ်းစားသနည်း။ သငျသညျပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား၏အစုစုကိုလုပ်ချင်ရန်ဆက်လက်အဖြစ်ရောင်းရန်?
ညာဘက်။ Dave, ဒီက Brian ပါ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ဒါကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတင်ဆက်မှုမှာတင်ပြထားတယ်။ managementက၏ ၉၅% သည်လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်တောင်ပိုင်းရှိထိပ်တန်းစျေးကွက် ၄ ခုတွင်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင် IPO ဟာအခြားသူတစ်ယောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေကိုစုစည်းပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကိုအလွန်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီတော့ဒီအခွင့်အလမ်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ထဲမှာစာရင်းကိုင်အရောင်းအဝယ်လိုပဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ဂျော်ဂျီယာကျွန်းသစ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဟာကြီးမားတဲ့ပြprovisions္ဌာန်းချက်တွေအတွက်အဲဒီစံနှုန်းနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သုံးခုသည်ရရှိသောအကျိုးအမြတ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်တိုးပွားလာသောသဘာဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂျော်ဂျီယာကျွန်းသစ်များ၊ ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမျှော်လင့်ချက်များအပြင်ဘက်တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏သစ်သားမော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာစျေးကွက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်လိုချင်သည့်အရာနှင့်ဆက်နွယ်သောပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုဖန်တီးပါ။ လုပ်ဖို့ စပါးကျီအဆင့်သည်တစ်95ကလျှင် ၂၈ တန်သာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပျမ်းမျှတစ်4ကလျှင် ၄၃ တန်ခန့်ရှိသည်။
ပြီးတော့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားရှုထောင့်ကကြည့်မယ် - ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့လို့လာမယ့် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာတစ်1.8က ၁ ဒသမ ၈ တန်လောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရှုထောင့်ကနေ ၄.၅ မှ ၅.၅ တန်အထိသာရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Dave ဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစျေးကွက်အတွင်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ IPO အချိန်ကတည်းကကောင်းကောင်း ၀ ယ်ခဲ့လို့ပါ။ ရှိပြီးသားပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ငွေအများကြီးပိုများပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလက်ရှိစျေးကွက်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစကေးများကိုဖန်တီးရန်နှင့်အပ်နှံထားသောသစ်သားပုံစံအောက်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်ပြန်လည်နေရာချထားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်ပတ်နေတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုကြိုက်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောမြို့တော်ပြန်လည်အသုံးချခြင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းသင်စဉ်းစားပါကကျွန်ုပ်တို့၏အနောက်တောင်ဘက်ဂုဏ်သတ္တိများကိုတက္ကဆက်နှင့်ဝီဇီယားနားတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ ထိုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Bandon ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ US တောင်ပိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကြွေးမြီအတွက်ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးနောက်ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်အရင်းအနှီးပြန်လည်အသုံးချခြင်းအခွင့်အလမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသဖြင့်၎င်းသည်မှန်ကန်သောနှုန်းထားဖြစ်ပုံရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အရင်းအနှီးမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ ယင်းသည်အရင်းအနှီးကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းသောကြွေးမြီများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပိုက်လိုင်းကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းအရင်းအနှီးကိုတိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုအလယ်အလတ်စျေးကွက်မျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့စတုတ္ထလေးလပတ် - ဒေါ်လာ ၅ သန်းကနေ ၁၀ သန်းကြားအနိမ့်ဆုံးအလယ်အလတ်စျေးကွက်ဝယ်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတွေ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့စပါးရိတ်သိမ်းမှုဆိုင်းငံ့မှုအပေါ်တစ်maybeကကို ၃၈ တန်မှ ၄၃ တန်မှစုစုပေါင်းသိုလှောင်တာကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာ၊ ရှေ့ဆက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီအတိုင်းထားမယ်၊ ဘယ်လိုသိုလှောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။ လာမည့်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခု, သုံးခုကျော်တိုးတက်မှုနှုန်း parameters တွေကိုပေးခြင်းအဆင့်ဆင့်? ၎င်းသည်သင့်အား ၄၃ တန်ဖြင့်ကြီးထွားနှုန်းနှင့်အတူထိန်းထားသလားသို့မဟုတ် ၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များသို့ပြန်ဆင်းလာပြီလား။ ဒါကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပထမဆုံးပြောရရင် IPO ပြီးကတည်းကရရှိခဲ့တဲ့ဝယ်ယူမှုတွေနဲ့စတင်တာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဆိုဒ်များကိုအမှန်တကယ်ဝယ်ယူရန်အခွင့်အရေးရရှိထားသည်။ ဒါကြောင့်တိုးတက်မှုနှုန်းရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပျမ်းမျှအားထက်အများကြီးပိုနေတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ၃၈ တန်မှ ၄၃ တန်အထိကြီးထွားလာချိန်မှာဒီအဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျှော့ချမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ငါတို့ကဒီတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးနေတယ်။ ကတစ်တန်လျှင် ၃၈ တန်အထက်၊ ၄၃ အောက်ကိုသာကျွန်တော်တို့လည်ပတ်မှာပါ။
နောက်လာမည့်မေးခွန်းကို Prospect Advisors နှင့် Albert Albert မှလာလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်ပါ
Albert Sebastian - Prospect Advisors LLC - လေ့လာသုံးသပ်သူ
မေးခွန်းအနည်းငယ်ပဲ။ ပထမ ဦး စွာသင်ဂျော်ဂျီယာတွင် ၁၄,၄၀၀ enteredကသို့ ၀ င်ရောက်သောရောင်းအားနှင့်ဆက်နွယ်သော EBITDA ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိူင်မည်လား။ ဇန်နဝါရီလတွင်သင်ပိတ်ခဲ့ပြီလား။
ညာဘက်။ ဒါကြောင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Al ကိုပိုပြီးဆွေးနွေးနိူင်တယ်။ ဒီတော့ဒါကလာမယ့် ၁၀ နှစ်အတွင်းတစ်နှစ်ကို ၁.၈ တန်နှုန်းလောက်ရှိပြီးဒါမှမဟုတ်တစ်တန်နှုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားသည့်ပျမ်းမျှအလေးချိန်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါကသင့်ကို EBITDA ပတ်ပတ်လည်မှာမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
အိုကေ။ အိုကေ။ သင့်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုကြည့်ရုံဖြင့်ဒီနှစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှပေးသောသင်၏အသားတင်ငွေသည် ၂၀၁၈ တွင်ဒေါ်လာ ၃၃ သန်းရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ခန့်ရှိသည်။ သင်ယခုနှစ်သင်၏ EBITDA လမ်းညွှန်မှုကို အခြေခံ၍ လမ်းညွှန်တစ်စုံတစ်ရာပေးနိုင်မည်လား၊ သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်၊
yeah ။ စဉ်းစားရန်တစ်နည်းမှာ၊ Al သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပေးချေမှုအချိုးကိုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က 75% မှ 85% ပေးချေမှုအချိုးကိုပစ်မှတ်ထား။ ဒါကြောင့် ၂၀၂၀ အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်များကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိရင်ငွေသားထုတ်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်ချက်ပြန်ယူနိုင်ပါတယ်။
အိုကေ။ အိုကေ။ နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိသောဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများမှဖြန့်ဖြူးမှုများသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤအမြောက်အများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၄ သန်းခန့်ရှိခဲ့သည်ဟုယူဆသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၈ တွင်ဒေါ်လာ ၅ သန်းအောက်သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Dawsonville ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ အတွက်ဒီနံပါတ်ကဘာဖြစ်မလဲ။
ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါအယ်လ်။ ဒါက Ursula ။ ငါအဲဒီမေးခွန်းကိုယူမယ်။ ဒါဆိုမှန်ပါတယ် ငါတို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း '19 အတွက် Dawsonville Bluffs ၏အလှူငွေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေါ်လာ ၄.၈ သန်းဝန်းကျင်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့စာအုပ်များတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂ သန်းခန့်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှော့ချရေးဘဏ်ချေးငွေများမှလာသည်။ ဒါကြောင့်နောက်နှစ်နှစ်လောက်အတွက်အလှူငွေရှုထောင့်ကနေ CatchMark အထိ - ဒါဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၀.၅ သန်းရမယ်၊ ဒါကိုမဆိုမကျော်လွှားနိုင်တော့ဘူးလို့ခန့်မှန်းရတယ်။
အိုကေ။ ဒီတော့ဒီမျဉ်းကြောင်းကဒီနှစ်အတွက်ဒေါ်လာ ၀.၅ သန်းဖြစ်မလား။
[အော်ပရေတာညွှန်ကြားချက်များ] ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်မေးခွန်းမှာရေမွန်ဂျိမ်းစ်နှင့် Collin Mings မှနောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါရုံ - ပထမ ဦး စွာငါ့ထံမှနောက်ဆက်တွဲရုံအစုစုအပေါ် Dave ရဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ချင်တယ်, သင်စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်းသင်ဝယ်ယူသည့်900က XNUMX အပေါ်အနည်းငယ်ပိုတိုးချဲ့နိုင်မလား။ ဒီထက်ပိုအသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်နေကြစဉ်မှာခင်ဗျားမှာကန်ထရိုက်စာချုပ်အောက်မှာအခြားဝယ်ယူမှုများရှိပါသလား။
ဒါကြောင့် Collin, 900က ၉၀၀, ငါတို့ကလက်ရှိစျေးကွက်ထဲမှာရှိနေတယ်။ ဤအချက်၌ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အလယ်စျေးကွက်၏အောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့သည့်အချက်များမှာကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုareaရိယာအားဖြင့်ထိုနေရာ၌အခွင့်အလမ်းအချို့ရှိသည်။ ဤစျေးကွက်များ၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆက်သွယ်မှုများစွာရှိနေပြီးဖြစ်ပုံရသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အားကောင်းသောပိုက်လိုင်းတစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၅ သန်းမှ ၁၀ သန်းအထိတည်ဆောက်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာစာချုပ်အောက်မှာဘာမှမရှိဘူး။ အရောင်းအ ၀ ယ်အတော်များများကိုကြည့်နေပါတယ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် IPO မှစတင်ကာကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သူ John Capriotti သည်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အခွင့်အရေးများကိုတည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုပြန်လည်ချိန်ညှိ။ ပြန်လည်တွက်ချက်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိareaရိယာအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာတကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်တော်တော်ကောင်းတဲ့ငွေဖြစ်လွယ်မှုရှာတာပါ။ ဒါကြောင့်စတုတ္ထသုံးလပတ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့5က ၉၀၀ ​​ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဈေးကွက်မှာတွေ့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတကယ်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်။
ညာဘက်။ ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်သည်စျေးကွက်တွင်ငွေဖြစ်လွယ်မှုရှုထောင့်မှအနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှေ့တောင်ဘက်ရှိပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ရှိအခွင့်အလမ်းများစွာကိုမြင်တွေ့ရခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုအရာအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပမာဏကိုဖော်ပြသည်။ Todd နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည် 2019 တွင်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ သည်ထိုနှစ်များအတွင်းလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများနှင့်နားများကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုအခွင့်အလမ်းလေးခုနှင့်ဆက်စပ်နေစေသည်။
အိုကေ။ ပြီးတော့ဒီနေရာကနေတစ်ခြားအိမ်မှုကိစ္စတစ်ခုကဒီနေရာမှာအကွာအဝေးကိုသင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကြီးမားတဲ့ပြprovisions္ဌာန်းချက်များမှမျှော်လင့်ထားသည့်အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသလိုပဲဒီမှာပဲ ၁၄,၄၀၀ reကသာသဘောတူညီပြီးပြီဖြစ်သည်။ မသေချာမရေရာမှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ထိုစာရင်း၏အချို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်လမ်းညွှန်အကွာအဝေးကိုထုတ်လွှင့်စဉ်သင်စဉ်းစားနေသောနောက်ထပ်ကြီးမားသောပြprovisions္ဌာန်းချက်များရှိပါသလား။
ဒါကငါတို့ Collin ဇန်နဝါရီလမှာငါတို့ပိတ်လိုက်တဲ့ငွေပေးငွေယူနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။
ဂရိတ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Collin ။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းနှင့်အဖြေကိုအဆုံးသတ်ထားသည်။ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားရန်အတွက်စီအီးအိုနှင့်ဥက္ကPresident္ဌဘရိုင်ယန်ဒေးဗစ်ကိုကွန်ဖရင့်ကိုပြန်ပြောင်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ကိုသွားပါ
Duration: 43 မိနစ်
ပိုမို CTT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
TOGO - သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် - လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၉ ဦး အား Amnesty ကထောက်ခံသည်
LSD, hallucinogenic မှို ... "စိတ်ပညာ" ဆေးပညာ "အံ့ဖွယ်အ" အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အခါ - ဗီဒီယို